Photos: All That Glitters Is Gold In This 5-Star Hotel In Vietnam - Wesupportpm Photos: All That Glitters Is Gold In This 5-Star Hotel In Vietnam - Wesupportpm
Home LIFESTYLE Photos: All That Glitters is Gold in This 5-Star Hotel in Vietnam
A view of the newly-inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake hotel, which features gold plated exteriors and interiors, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam. (Image: Reuters)
Staffers open the doors of the newly-inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake luxury hotel, which features gold plated exteriors and interiors, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam. (Image: Reuters)
An employee in traditional dress is seen in the newly-inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake luxury hotel, which features gold plated exteriors and interiors, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam. (Image: Reuters)
Gold plated toilets are seen at the newly-inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake hotel, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam. (Image: Reuters)
A gold plated bathroom sink is seen in the newly-inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake luxury hotel, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam. (Image: Reuters)
A woman poses for a photo at the gold plated infinity pool of the newly-inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake luxury hotel, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam. (Image: Reuters)
A gold plated bathtub and a gold plated toilet are seen in the newly-inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake luxury hotel, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam. (Image: Reuters)
A gold plated bathroom sink and a gold plated toilet are seen in the newly-inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake luxury hotel, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam. (Image: Reuters)
A gold plated bathtub is seen in the newly-inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake luxury hotel, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam. (Image: Reuters)
A boy jumps into the water at the gold-plated infinity pool of the newly inaugurated Dolce Hanoi Golden Lake luxury hotel, after the government eased a nationwide lockdown following the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hanoi, Vietnam. (Image: Reuters)
Next article5 Popular Mango Myths and the Truth About Them